မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - မကြာခဏမေးသောမေးခွန်း - HHO စက်ရုံ
ပင်မစာမျက်နှာ > မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အမေးများသောမေးခွန်းများ - HHO KITS Super Thin HHO X-CELL Plug 'N Play နှင့် DIY ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိရိယာများ
ငါ့ကားကပါးပျဉ်းအောက်မှာနေရာလွတ်သိပ်မရှိဘူး။ HHO KH HHO သတ်မှတ်ထားသော HHO ဓာတ်ငွေ့မီးစက်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
HHO KIT ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည့်နေရာအမြဲရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Super Thin ဟိုက်ဒရိုဂျင်မီးစက် X-Cell သည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီ၏အရွယ်အစားအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အရိပ်တွင်အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်အလွယ်တကူအအေးခံရန်အကြံပြုထားသောနေရာသည်ကားရှေ့ရှေ့ကင်နှင့်အအေးပေးစက်ကြားတွင်ကားရှေ့တွင်ရှိသည်။
ကားနှင့် SUV အကြားကွာခြားချက်?
ကားများအတွက် iX သည်အမြင့် ၁၂၂ မီလီမီတာသာရှိပြီးအသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးမော်တော်ယာဉ်အားလုံးတွင်နေရာချနိုင်သည်။ X သည် ၁၄၂ မီလီမီတာထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်။ ကားများနှင့် SUVs နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Plug 'N' Play နှင့် DIY ကိုစက်ပြင်ရန်အတွက်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
'N' ကစားရန် Plug သင်၏မော်တော်ယာဉ်၏ All-in-one HHO X-CELL ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း / တပ်ဆင်ခြင်းမည်သည့်စက်ယန္တရားမျှမပါဘဲသင်ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ Plug 'N' Play assembly / fit သည် ၁၅ မိနစ်မှမိနစ် ၃၀ အထိကြာရှည်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
DIY 5-in4 Blue Display နှင့် Smart LCD Relay မပါ ၀ င်သောလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၊ ၅ pin relay များ၊ PWM AMP အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ fittings များ၊ အချို့သောနေ့ရက်များတွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည် ၃-၅ နာရီခန့်ကြာနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဤအလုပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး လိုအပ်သည်။ ဝါသနာအရဝါသနာပါသည့်လျှပ်စစ်များကို DIY ကိုအကြံပြုသည်။
ငါသေးငယ်တဲ့ 400cc အင်ဂျင်အတွက် ix2231 ကိုသုံးပါ။ စီးပွားရေးနှင့်ကာဗွန်သန့်ရှင်းရေးကိုမည်သို့လောင်စာဖြစ်စေသနည်း။
ကာဗွန်သန့်ရှင်းရေးကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့များပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါကပိုမိုအင်ဂျင်နီယာများမှထုတ်လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့များနှင့်အင်ဂျင်အသေးစားအားလုံးတွင်လောင်စာဆီစုဆောင်းခြင်းမရှိသောအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံနည်းကျနိယာမနှင့်ချက်ချင်းပconflictိပက္ခဖြစ်သည်။ ရုံအလွန်နိမ့် amps စောင့်ရှောက်!
အဘယ်ကြောင့်4သို့မဟုတ် 5-speed အော်တိုဂီယာနှင့်အတူကုန်းဆင်းရွှေ့?
အကယ်၍ အင်ဂျင်တွင်အမြင့်ဆုံးဂီယာအချိုးသည် ၄ ​​မှ ၅ သာရှိလျှင် 4L ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်5- 2.2 RPM အကြားနှေးကွေးသောနှုန်းဖြင့်လည်ပတ်ရမည်။ ဤလှည့်ကွက်သည်အောက်သို့ဆင်းသည့်အခါကြားနေနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ထိပ်တန်းဂီယာနှင့်လောင်စာချွေတာမှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့်အမြဲမောင်းပါ။
ကားထဲတွင်ကွန်ပျူတာ chip ကိုကျော်လွှားနည်း
အကောင်းဆုံးသောလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ ECU ကိုမလိမ်ပါ။ Lexus 3.9L / 100km ဆီသို့ iX300 မှထုတ်လွှတ်လိုက်သောသေးငယ်သော hho ဓာတ်ငွေ့များထည့်ပြီးပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ HHO X-Cell ပစ္စည်းများသည်အလွန်နည်းသော mAMPs ၃၀၀ နှင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နိယာမနှင့်ရင်းနှီးသည်။ ညံ့ဖျင်းသောအခြေအနေတွင်ရှိသည့်မည်သည့်အာရုံခံကိရိယာကိုမဆိုသင်ရှင်းလင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးရန်သာအကြံပြုပါသည်။ အစဉ်အမြဲနီးပါးနီးပါးဆေးထိုးများတွင်အဝတ်လျှော်အောက်မှာယိုစိမ့်သာရှိပါတယ်, တစ်ပြုပြင်ပြီးနောက်, အများဆုံးငွေစုဘို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲဖို့အခြေခံကျပါလိမ့်မယ်။
ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ www.HHOmercedes.com or www.HHOlexus.com
အကယ်၍ သင်သည် HHO X-Cell ဖြင့်မြို့တွင်း၌မောင်းနှင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ SAVING CHIP အသစ်သည်လောင်စာသုံးစွဲမှုကို ၁၅ မှ ၂၀% အထိသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ 15% အာမခံချက်နှင့်အတူ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတောင်းပါ။
လောင်စာချွေတာရန်အတွက် 5-10-15-30A ထက်ပိုမိုသော Amp mean current ကိုပိုမိုတပ်ဆင်ရန်ပိုကောင်းပါသလား။
ဟင့်အင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ကြားနေပန်းကန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဂျင်နရေတာကဲ့သို့သော HHO DRY CELL စသည်တို့ကို ၁၅A နှင့် 15A အထက်တွင်ထည့်သွင်းထားပြီးလောင်စာချွေတာသည့်မှတ်တမ်းမရှိပါ။ ကျနော်တို့ကြားနေပြားဖယ်ရှားပြီး AMP - PWM အသံချဲ့စက်ကို သုံး၍ input ကို 30mA / 300A သာထားသောအခါအကောင်းဆုံးလောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိသည်။ လူတိုင်းနားထောင်ပါ၊ လောင်စာဆီချွေတာခြင်းသည်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်နိယာမကိုချိုးဖောက်ရန်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Alternator မှအမ်ပီယာများ (လက်ရှိ) ကိုများများစားစားအသုံးပြုပါကသင်သည်လောင်စာဆီပိုများမည်မဟုတ်ပါ။
အင်ဂျင်ပိတ်ထားသည့်အခါ bubbler ရေသည်ရေတိုင်ကီသို့အဘယ်ကြောင့်ပြန်လာသနည်း။
ပုံမှန်အားဖြင့်အင်ဂျင်ပိတ်ထားသည့်အခါ bubbler ရေသည်ရေတိုင်ကီသို့ပြန်သွားသည်။ လေဟာနယ်သေးသေးလေးတစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် bubbler ရေကိုအဓိကယူနစ်ထဲသို့ပြန်လည်စုပ်ယူသည်။ Bubbler သည်အထူးသဖြင့် DRY CELL ကဲ့သို့သောအပူများသောအခြေအနေများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ HHO X-CELL သည်မလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကဲ့သို့အရိပ်သည် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းတို့၏ bubbler သည်အပူရေကိုအငွေ့ပြန်ခြင်းဖြင့်အလွန်လျင်မြန်စွာဖြည့်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အင်ဂျင်ကိုပိတ်ထားသည့်အခါတိုင်း back-up function သည်အရေးကြီးပါတယ်။
အောက်ဆီဂျင်အာရုံခံကိရိယာကိုလှည့်စားသောအခါ HHO ကုန်သည်များအနေဖြင့်မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမှမရှိဘဲ (ဗို့အားကို 1V သို့ပြောင်းခြင်းဖြင့်နည်းစနစ်အရသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်နည်းနည်း) နည်းသည်ဟုဆိုသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်မှာလောင်စာဆီနည်းပေမယ့်ဘက်မလိုက်ဘဲစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးဘက်ထရီအဟောင်းကိုမော်တော်ကားအဟောင်းနဲ့အားသွင်းရင်းအင်ဂျင်ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ထုတ်လွှတ်မှု ၂-၄ ဆပိုမိုဆိုးရွားနေပြီးလောင်ကျွမ်းမှုအလုံအလောက်မရှိခြင်းကြောင့်ခေါင်းပေါ် gaskets အတွက်ပင်ဆိုးရွားသွားလိမ့်မည်။ သင်မောင်းသည့်အခါစွမ်းအားနည်းသောကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်သက်တမ်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အတူတူလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုရရှိသည်။ Lambda Sensor ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းသည်သင့်တွင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော ၁၀၀% ပါဝါကိုအသုံးမပြုဘဲသီးခြားလွတ်လပ်သောဟိုက်ဒရိုဂျင် (သို့မဟုတ် LPG) အရင်းအမြစ်ရှိလျှင်သာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ် အကောင်းဆုံးလောင်စာဆီသုံးစွဲရန်လွယ်ကူသည်။ အကောင်းဆုံးလောင်စာဆီချွေတာမှုအတွက်ဒိုင်ခွက်ပေါ်ရှိစမ်းသပ်မှုများနှင့်နာရီများကိုသာကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုကောင်းမကောင်းမောင်းနှင်မှုကိုကွန်ပျူတာကပြလိမ့်မယ်။ မီးနှင့်ပန်ကာအပါအ ၀ င်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးစံချိန်တင်ဘို့နွေရာသီ၌ဖြစ်ပေမယ့်သင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရှိပါကသင်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ် -1,5l ECU သို့မဟုတ် lambda လိမ်မနေပါနဲ့! လောင်စာဆီအရည်အသွေးကိုအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်မှုဖြင့် HHO X-CELL ဖြင့်သိမ်းထားပါ။
HHO ဓာတ်ငွေ့သည် lambda အောက်စီဂျင်အာရုံခံကိရိယာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။
စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ် အကောင်းဆုံးလောင်စာဆီသုံးစွဲရန်လွယ်ကူသည်။ လမ်း ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနှင့် ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကိုသာစစ်ဆေး။ အကောင်းဆုံးလောင်စာဆီသက်သာမှုအတွက်ဒိုင်ခွက်တွင်ကြည့်ပါ။ မည်သည့်နေရာ၌ကားမောင်းနှင်နေသည်ကိုကွန်ပျူတာကပြလိမ့်မည်။ မီးနှင့်ပန်ကာအပါအ ၀ င်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးစံချိန်တင်ဘို့နွေရာသီ၌ဖြစ်ပေမယ့်သင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရှိပါကသင်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ် -15l ECU သို့မဟုတ် lambda လိမ်မနေပါနဲ့! လောင်စာဆီအရည်အသွေးကိုအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်မှုဖြင့် HHO X-CELL ဖြင့်သိမ်းထားပါ။
မဟုတ်ပါ။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ [ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ဒီဇယ်] သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုရေသို့ပြန်ပြောင်း။ အငွေ့ထွက်သည့်စနစ်မှထွက်လာသောကြောင့်လောင်ကျွမ်းနေစဉ်အတွင်းအပူအလုံအလောက်ထုတ်လုပ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်ထဲသို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်အင်ဂျင်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် torque နှင့်မြင်းကောင်ရေအားမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၊ သင်၏အိပ်ဇောမှတစ်ဆင့်လက်ရှိလေထဲတွင်ထုတ်လွှတ်နေသောဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ သင်၏အင်ဂျင်အတွင်းရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ဒီဇယ်ထက် ပို၍ ကောင်းပြီးသန့်ရှင်းသည်။ ၎င်းသည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုယခင်ကထက်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။
လိုအပ်ပါကရေတိုင်ကီကိုရေစက်ရေဖြည့်ခြင်း။ ၁၀၀၀ ကီလိုမီတာတိုင်းမှာမင်းက ၁ လီတာရေလိုတယ်။ ခြောက်လတစ်ကြိမ်အသုံးပြုမှုပမာဏပေါ် မူတည်၍ ၎င်းစနစ်ကိုရေနှင့်သန့်စင်ရန်နှင့်ရေသန့်ထားသောရေနှင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြည့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းကိုအစားထိုးရန်အကြံပြုသည်။
အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ဓါတ်သည် KOH (ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ဖြစ်သည်။ အလွန်စျေးပေါနှင့်ရှာဖွေလွယ်ကူသော။
ကျွန်ုပ်၏မီးစက်ထဲတွင် Deionized - Distillated ရေကိုမသုံးပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
ပေါင်းခံရေသည်အခြေခံအားဖြင့်စင်ကြယ်သောရေဖြစ်သည်။ အခြားရေပေးဝေမှုရေ၊ တွင်းထွက်ရေ၊ ရေကန်၊ ပင်လယ်ရေစသည်ကဲ့သို့သောရေအမျိုးအစားများသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဓာတ်သတ္တုများနှင့်ရေထဲရှိအညစ်အကြေးများကြောင့်လျှပ်စစ်အားဖြင့်ရွှံ့များဖြစ်လာစေသည်။ ရွှံ့သော electrolyte သည်မီးစက်ပြားများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပြီးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေသည့်လျှပ်ကာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
အခြားသောဓာတ်ကူပစ္စည်းအမျိုးအစားများအထူးသဖြင့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါသို့မဟုတ်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ကဲ့သို့ဆိုဒီယမ်ပါသည့်မည်သည့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းမဆိုအလားတူပင်။ ဆိုဒီယမ်သည် Electrolyzer ပြားကိုလျင်မြန်စွာညစ်ညမ်းစေပြီးယူနစ်အားထိရောက်မှုမရှိစေပါ။
ဆောင်းရာသီတွင် -30 ° C, -22.0 ° F?
၁၀-၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရောက်သောအခါနှင်းခဲပြင်းထန်သောအခါ HHO အဓိကယူနစ်ကို -10% -25% အောက်တွင်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုသင်မသိပါကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုကာကွယ်ရန်ခရီးဆောင် HHO ကိရိယာကိုဖြုတ်။ ဖယ်ရှားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်အခမဲ့ပေးအပ်ခြင်း။
ခြောက်သွေ့သော KOH ၁၀ မီလီမီတာမှ ၃၀ မီလီမီတာရှိသော Electrolyte သည် HHO ကိရိယာ၏ပမာဏနှင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ခန့်မှန်းထားသည်။ -10 / -30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ ရေ ၁၀၀ မီလီယံတိုင်းအတွက်နောက်ထပ် ၃၀ မီလီမီတာခြောက်သွေ့သော KOH ကိုထည့်သောအခါ၊ Electrolyte သည် -10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအေးခဲခြင်းမရှိပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာစမ်းကြည့်ကြည့်ပါ ဦး ။
အခြားရွေးချယ်စရာအအေးခဲနေသောဖြေရှင်းချက် - ရေ - isopropyl အရက်ရောစပ်ခြင်းသည်အရည်ပျော်မှတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ခါးသောအရသာရှိပြီးမသောက်နိုင်ပါ။ Isopropyl အရက်သည်အပူချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့် -89 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (-128 ° F) တွင်အေးခဲခြင်းနှင့်အတူပိုမိုများပြားလာသည်။
အပူချိန် -99.99% မှ -30% အောက်သို့ကျဆင်းပါက HHO cell antifreeze နှင့် detergent အတွက် 50% isopropyl alcohol ထည့်ပါ။ Isopropyl အရက်သည်သင်၏ HHO စနစ်၏ဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်ပြီးရေကိုအေးခဲစေခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည် - ၃၀% မှ ၅၀% အထိ။ Isopropanol သည်သဘာ ၀ အိမ်ထောင်စုထုတ်ကုန်များအားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ခဲယဉ်းသောလက်သည်းများကိုဖယ်ရှားရန်အင်တီဖရီဂျင်တွင်အသင့်အတင့်ကြည်လင်စေခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ပါ ၀ င်သည့်အရာ၊
သတိပေးချက် - အင်ဂျင်ကိုမဖွင့်ခင်ရေခဲများ၊ တလမ်းတည်းရှိသောအဆို့ရှင်အနေအထားသို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောတပ်ဆင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြတ်တောက်သောရေပိုက်များကြောင့်ရေပိုက်ကိုပိတ်ဆို့မထားပါ။ HHO ဓာတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှုအားပိတ်ဆို့ခြင်းသည် HHO ၏အဓိကယူနစ်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေပြီးပြန်လည်အစားထိုးခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို On-demand ပြုလုပ်သည်။ မင်းရဲ့ကားရွေ့လျားမှသာမင်းဟာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုရရှိလိမ့်မယ် ဖိအားရှိသောဓာတ်ငွေ့ကန်များနှင့်မတူဘဲ၊ စနစ်အတွင်း၌ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖိအားအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, HHO အထောက်အပံ့ကိုသင်၏ HHO KIT HHO သတ်မှတ်ထားသော HHO ဓာတ်ငွေ့မီးစက်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေဆဲ ၅ နှစ်ကြာယူနစ်များရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ရောင်းချသူများဖြစ်လာရန်စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ငါတို့ထုတ်ကုန်တွေအားလုံးကိုထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်လို့ပါ။ ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်များပြားသောပစ္စည်းများကိုအမြောက်အများဝယ်ယူနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးသင်၏ငွေစုကိုသင့်ထံသို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စျေးကြီးလွန်းသဖြင့်ပျမ်းမျှစားသုံးသူမ ၀ ယ်နိုင်ပါကအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကားထဲတွင် HHO KH HHO သတ်မှတ်ထားသော HHO ဓာတ်ငွေ့ထုတ်စက်များကိုကျွန်ုပ်သုံးနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ အထက်ပါမော်ဒယ်ကိုသင်၏ကားအတွက်သုံးနိုင်သည်။ မီးစက်၏သက်တမ်းသည်များပြားလာလိမ့်မည်။ မော်ဒယ်များအကြားစျေးနှုန်းကွာခြားချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အင်ဂျင်နောက်ဆုတ်ပါကမည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆိုတားဆီးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာအစုံတွင် bubbler နှင့်မပြန်သော Check Valve တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ bubbler သည်အင်ဂျင်သို့ပို့လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့မှ elecvapourte အငွေ့များကိုမည်သည့်လမ်းကြောင်းမှမဆိုဆေးကြောလိမ့်မည်။
သင်သည်ရေစက်သို့မဟုတ် deionized ရေကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
HHO KH HHO set HHO ဓာတ်ငွေ့ထုတ်စက်များသည်ကျွန်ုပ်၏မော်တော်ယာဉ်အာမခံကိုပယ်ဖျက်မည်လား။
အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သောထပ်ဆောင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်အင်ဂျင်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုပါကသင်၏ HHO KIT HHO ၏သတ်မှတ်ထားသော HHO ဓာတ်ငွေ့မီးစက်များသည်သင်၏အာမခံချက်ကိုပျက်ပြယ်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်လက်စွဲစာအုပ်ကို download စာမျက်နှာသို့ချက်ချင်းအခမဲ့ရယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မတော်တဆစာမျက်နှာတစ်ခုကိုကျော်သွားခြင်းသို့မဟုတ် browser ကိုပိတ်လိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ပို့ပါ။
HHO ဆေးထိုးသည် Turbo ရှိမော်တော်ယာဉ်များတွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ HHO KH HHO မီးစက်များသည် turbocharged အင်ဂျင်များတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ HHO ဓာတ်ငွေ့ကို Turbo charger မတိုင်မီ၊ ပြီးနောက်ပြီးနောက်မဟုတ်ဘဲသေချာစွာဆေးထိုးပါ။
ပန်းကန်ဆဲလ်မည်မျှ HHO ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်?
ဤခေတ်မီ HHO X-CELL ကိရိယာများသည်နေရာများစွာတွင်သာနေရာယူထားသော HHO ခြောက်သွေ့သောဆဲလ်များကဲ့သို့အသုံးမကျသောကြားနေပြားများမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ခုတည်းသော cathode နှင့် anode ပြားများသည် HHO ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်သည်။ ၄.၅ စင်တီမီတာသာရှိပြီး HHO X-CELL Slim သည် + နှင့်အတူ cores ပေါင်းများစွာကိုဆိုလိုသည်။ INOX A4.5 သံမဏိ ၃၁၆ သံမဏိပြားများသည်အမြင့်ဆုံး HHO ခြောက်သွေ့ဆဲလ်များ (၂၅ စင်တီမီတာအဆီ) နှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော် HHO မီးစက်အရွယ်အစားသည်ငါးဆပိုမိုပါးသည် ။ ဤသည်ဖြင့် HHO ခြောက်သွေ့သောဆဲလ်နေရာမရှိသောမည်သည့်ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်တွင်မဆိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ HHO FACTORY Co. , Ltd မှတီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် PWM AMP Booster သည်အိုင်ယာလန်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၅ ဆတိုးတက်စေသည်။ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာအချိန်တိုင်းအေးသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ရေနွေးငွေ့နှင့်ဝန်တင်လွန်းခြင်းမရှိချေ။ ဆီဖြည့်သည့်ရေသည်ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ကြားအထိကျယ်ဝန်းသည် (HHO ခြောက်သွေ့သောဆဲလ်များသည်ကီလိုမီတာ ၈၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိသာရှိသည်) ။
အမည် အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာ [Message]